Yintoni kunye nendlela yokusebenzisa ifowuni ye-Android ngeDual SIM | I-Androidsis
Yintoni kunye nendlela yokusebenzisa ii-smartphones ze-SIM ezimbini
Xa kwaziswa ifowuni entsha, Kuqhelekile kuthi ukuva ukuba ine-SIM ezimbini. Lixesha elixhaphakileyo kwimarike, kodwa inye abasebenzisi abaninzi abangacacanga gca ngayo. Ekuphela kwento esiyiqondayo malunga noku kukuba amakhadi amabini e-SIM anokusetyenziswa kule fowuni. Nangona into eluncedo kunye nendlela yokuyisebenzisa ayisiyonto wonke umntu acace gca ngayo.
Ke ngoko, apha ngezantsi sichaza ngakumbi malunga ziyintoni, ziyintoni kwaye zisebenza njani iifowuni ze-Android ezisebenza ngeSIM ezimbini. Ke, ukuba unayo okanye uza kuthenga ifowuni yolu hlobo, kuya kuba lula kakhulu kuwe ukuba ube nale mbono icacileyo.
1 Zithini iiFowuni ezimbini zeSIM kwaye zezantoni?
2 Ungazisebenzisa njani iifowuni ezimbini zeSIM
Zithini iiFowuni ezimbini zeSIM kwaye zezantoni?
Njengoko sikuxelele ekuqaleni, Iifowuni ze-Android ezine-SIM ezimbini zizo ezinendawo yamakhadi amabini e-SIM. Ke kunokwenzeka ukuba ube neefowuni ezimbini ngaxeshanye. Eyona nto ixhaphake kakhulu kwiifowuni zangoku ezineli nqaku zezine-4G LGE SIM kwaye enye yi-3G. Nangona kwisiphelo esiphakamileyo uninzi lwazo sele lune-4G LGE.
Ke ngoko, enkosi kwifowuni ye-Android eneDual SIM kunokwenzeka ukuba ube nale migca mibini yefowuni ngaxeshanye. Ukhetho olufanelekileyo lwe abantu abasebenzisa ifowuni enye kusetyenziso lwabucala kunye noshishino. Ngale ndlela, awunyanzelekanga ukuba uchithe imali kwifowuni eyongezelelweyo. Isixhobo esinjalo sinokugcina iindleko kubathengi abaninzi.
Ikwayi- ukhetho olulungileyo kubantu abachitha ixesha elininzi phesheya, nokuba yeyomsebenzi okanye kukuba banenye indlu apho okanye ukonwaba. Ngale ndlela, kunokwenzeka ukuba ube ne-SIM khadi evela kwilizwe lakho lokuzalwa kunye nelinye eliphuma kwilizwe kwifowuni enye. Ikusindisa ekubeni utshintshe amakhadi ngalo lonke ixesha uhamba. Ke kulunge ngakumbi kumsebenzisi.
Kwinqanaba lezoqoqosho, Ingathetha ukonga ngokuxhomekeke kwiirhafu okanye ukunyuselwa kwabaqhubi. Kukho abasebenzisi abasebenzisa ithuba lokuba neSIM ezimbini ukudibanisa amaxabiso. Ke enye isetyenziselwa ukunxibelelana ne-Intanethi kwaye enye ukwenza iifowuni. Kukho nabasebenzisi abasebenzisa elinye lamakhadi anesivumelwano kunye nezinye ezihlawulelwa kwangaphambili. Ukudityaniswa kwale ndlela kuninzi, ke ngokuxhomekeke kwinto oyikhangelayo, unokuza nendibaniselwano yakho. Ke kubalulekile ukuba ujonge kakuhle ukunyuselwa kunye neendleko ezinenqanaba ngalinye okanye unyuselo, ukuze ingakubizi ngaphezu kokuba unayo iSIM khadi enye.
Ungazisebenzisa njani iifowuni ezimbini zeSIM
Ukuba sele uthenge ifowuni ngeDual SIM, ufuna ukwazi ukuba ungawusebenzisa njani lo msebenzi. Eli lelona candelo lilula kuzo zonke, kuba amanyathelo ekufuneka elandelwe alula kakhulu. Nje ukuba sele sinamakhadi amabini e-SIM, kufuneka sizifake kwindawo yazo, Kuxhomekeke kwifowuni kuya kuba kwenye indawo. Xa siyenzile le nto, sivula ifowuni ngesiqhelo.
Kufanele si Yiya kuseto okanye uqwalaselo lwefowuni yakho ye-Android apha ngezantsi. Apho kufuneka sijonge icandelo kunxibelelwano olungenazingcingo kunye neenethiwekhi. Kuxhomekeke kuphawu, banokuba ngamacandelo amabini ahlukeneyo, kodwa la ngamacandelo ekufuneka uwajongile.
Kule ndawo siza kukwazi ukuyibona loo nto ifowuni yethu ibona omabini amakhadi eSIM esiyisebenzisileyo. Ke le Dual SIM isebenza kakuhle. Ngoku siya kuba nethuba lokukhetha into esifuna ukuba ibe yeyiphi yamakhadi, kwimeko apho siza kusebenzisa enye ukubiza kunye nenye kunxibelelwano lwe-Intanethi.
Ukuba sinesim khadi esiza kuyisebenzisa phesheya okanye enye yeyomsebenzi kwaye enye eyimfihlo, singasoloko sisebenza enye kwezi zimbini kweli candelo linye. Ngokukhawuleza xa sifuna ukuyisebenzisa, sinokuyisebenzisa kwakhona ngendlela efanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Yintoni kunye nendlela yokusebenzisa ii-smartphones ze-SIM ezimbini
Inqaku eliluncedo kakhulu. Ndisebenzisa ngokukodwa i-S4 mini Duos iminyaka eliqela ngoku kwaye ndinee-sims ezi-2 zokudibanisa izicwangciso zam zonxibelelwano kunye nomnxeba kwaye ibindilungele.
I-Nasher_87 (ARG) sitsho
U-Eder angakuxelela ukuba wandise ngaphezu kokuphela kokuphela, namhlanje nokuba yi-Moto E, i-Galaxy A3 / A5 ine-sim ezimbini kunye ne-Standy ezimbini ze-4G / LTE. Ngaphezu koko, ndicinga ukuba iMoto C / M ine-4G kwii-sim zombini
Phendula kwi-Nasher_87 (ARG)
Ungazilungelelanisa njani izixhobo zakho zefowuni
U-Evan Blass uqinisekisa uyilo lweGoogle Pixel 3 kunye ne-3 XL kunikezelo olutsha